Day: Mee 15, 2020
N'ime oke nke ị ga - eme ihe megide ọrịa coronavirus (Covid-19), a ga - etinyere usoro iwu a na 16-19 Mee 2020, dịka mkpebi nke Ankara Governorship nke Provincial Public Health Board, nke akara ụbọchị 13.05.2020 na ọnụ ọgụgụ 2020/34. [More ...]
Na ncheta ọmụmụ 19 nke May 101, njem Atatürk si Istanbul gaa Samsun na Bandırma Ferry na-atụgharịrị na ịntanetị. Bandırma Ferry, nke ga-esi Istanbul pụọ na Mee 16 na emume "Route of the Century", Mọnde, Mee 19. [More ...]
Ọrụ ka na-aga n’ihu n’iwu nke ikpeazụ nke Altınordu Intercity Bus Terminal, nke Ordu Metropolitan Municipality dị n’etiti Altınordu wuru, na mpaghara 3 puku 177 m2 n’akụkụ ụzọ mgbanaka ahụ. Gburugburu ọnụ ọnụ 22.000 [More ...]
Obodo Kayseri na-emebi ndị tagzi azụmahịa yana ụgbọ njem ọha na eze maka njem dị mma. Ndị na - efe efe na - ebufe ihe dị ka 800 ndị na - anya tagzi na Kayseri. Kayseri [More ...]
Na-arụ ọrụ na nnukwu nsọpụrụ ụbọchị na abalị maka ụgbọ oloko eletrik, TÜVASAŞ bụ naanị izu abụọ site na May 29, enyere onye Minista Mustafa Varank. Electricgbọ ala eletrik bụ [More ...]
Obodo Konya na - emebi takisi na azụmahịa na usoro dị larịị nke usoro ọ na - emegide ụdị ọrịa coronavirus ọhụrụ (Kovid-19). Kovid-19 na-anya bọs na trambụ ụbọchị mbụ nke ntiwapụ ahụ [More ...]
Kocaeli Metropolitan Municipality TransportationPark na-enye ụgbọ njem nke ọma, nke ịdị ọcha ma na-efe efe oge niile na ọtụtụ puku ndị njem kwa ụbọchị na bọs ya. Obodo ukwu nke Obodo na-agba bọl milion abụọ na ọkara n'ime ọnwa 1 n'oge agha megide coronavirus [More ...]
Oge mgbochi a, ekwuputara n'oge oge n'ihi oria ojoo nke Covid-19, ga-adịkwa n'ọrụ site na 16 ruo 19 Mee. Ọ bụ ezie na ndị bi na Istanbul nọrọ n'ụlọ ha na-esochi mmachi oge maka ụbọchị 4, ọtụtụ nkeji nke IMM [More ...]
Obodo Izmir nke obodo mepere emepe mere mkpebi dị mkpa kwekọ na nkwenye nke Kọmitii Sayensị nke Ministry nke Health. Iji mee ka ọrịa coronavirus sie ike, nke nwere mbufe mbufe, a gaghị agbanye bọs ndị ahụ obere oge. Obodo Izmir [More ...]
Presswa wee pịa bọtịnụ ahụ iji tụgharịa wiil ndị ahụ. Turkey ga-ewebata usoro ọhụrụ na usoro a: ntọala ndị dịpụrụ adịpụ. Ihe mbu nke uzo MÜSİAD guzobere na Tekirdağ na 15 June. Ọnụ ụzọ [More ...]
Onye na-ahụ maka ngwa agha nke Ukraine kesara nkọwa ụfọdụ gbasara atụmatụ atọ a ọ mepụtara maka ịmalite ịmalite njem na njem ndị njem. Onye isi ala Vladislav Krikliy kwuru, "ationgbọ njem ga-apụ na kwụrụ kwụrụ na ntanetị. Iji kpebie ụbọchị ezubere nke usoro dị iche iche na njedebe izu, [More ...]
Onye isi ala nke Onye isi nchekwa nke Onye isi ala. Dr. İsmail Demir nyochara ngwaọrụ MR ụlọ izizi nke ndị ASELSAN na Bilkent UMRAM zụpụtara ụdị ya. Na-ekwupụta banyere onyinye nke ụlọ ọrụ nchekwa na mpaghara ahụike, Demir kwuru, “ASELSAN [More ...]
Ọnwụnwa anụmanụ na-amalite maka Covid-19 Antiserum
"Nzube ọgwụgwọ Hyperimmunserum megide COVID-19", nke Ministry of Agriculture na akai na-akwado, na mmekorita ya na Directorate nke Etlik Veterinary Control Central Research Institute (Etlik VKMAEM) na General Directorate nke Ahụike Ọha nke Ministry of Health. [More ...]
Industrylọ Ọrụ Anyị Ga-eji Nzọụkwụ Mgboro Gaa Ọrụ Ya
Onye Minista nke Technologylọ ọrụ na nka na ụzụ, Mustafa Varank rụtụrụ aka na ha ga-edobe mmepụta n'okpuru ọnọdụ na ọnọdụ niile, wee kwuo, “Anyị ga-emejuputa atumatu ga-eme ka anyị nwekwuo ike asọmpi karịa. Industrylọ ọrụ anyị ga-eji obi ike gaa n'ihu. ” kwuru. [More ...]
Ọrụ nke gidị Ọcha na Crimetù Ndị Mpụ A Haziri!
N'ime ọrụ nke General Directorate of Security, Ngalaba KOM; na nso nso a na-ekere òkè na mgbasa ozi na-elekọta mmadụ na otu abụọ, karịsịa na-akwado ma na-emegide ọtụtụ ndị omekome a haziri ahazi nke mba. [More ...]
Otu ndi otu Vefa Social Support, nke hibere n'okpuru nhazi nke ndi ochichi na ndi isi ochichi, gosiputara nnukwu nguzogide n’ime ubochi 53. Ndị otu na-eguzosi ike n'ihe ruru ezinụlọ 53 n'ime ụbọchị 5.674.281, ndị nke afọ 65 na ndị okenye na ndị nwere ọrịa na-adịghị ala ala [More ...]
Ngwaahịa PARAM nke TURK Elektronik Para wepụrụ ihe egwu ndị dị ka igwu wayo na izu ohi na azụmaahịa nke ugbo ala nke abụọ ma gbochie mfu ihe. Usoro ịkwụ ụgwọ ngwa ngwa [More ...]
Site na mmeghe nke okporo ụzọ Liverpool na Manchester na Septemba 1830, ọrụ ụgbọ oloko uzuoku malitere. Tupu e mepụta ụgbọ oloko ahụ, ọtụtụ ụgbọ oloko na-eji ike anụmanụ arụ ọrụ ma jiri ya na-ebugharị unyi na ibu yiri ya na obere oge. Liverpool na Manchester gbara onwe ha [More ...]
Ọdụ ụgbọ oloko Hicaz
Ewuru na 1909 (Hijri 1327), ọdụ a dị 20 kilomita ndịda ndịda ọwụwa anyanwụ nke Sehl El-Matran na 15 kilomita site na ọdụ ụgbọ elu Sehl El-Matran. Ọdụ a yiri n'ọdịdị ụlọ ọrụ ndị ọzọ [More ...]
Taa na Akụkọ ihe mere eme: 15 Mee 1923 ilzọ Okporo Orizọ Oriental na Zurich
Taa na akụkọ 15 Mee 1891 enwere oghere Lefke-Bilecik (36 km). Ejiri 125 friji jiri kilogram. Mee 15, 1923 sharesfọdụ òkè nke Eastern Railways Bank na Zurich zụtara na England. Thislọ akụ a; [More ...]